Afrika, 07 April 2019
Axad 7 April 2019
Xal laga gaaray muran sababay inuu xirmo suuqa Islli
Waxaa xal laga gaaray muran u dhaxeeyay ganacsatada magaalada Islii iyo waaxda canshuuraha dalka Kenya, kaasi oo sababay in maalmo la xiro suuqa Islii.
Libya: Ciidamada Haftar oo dib loo celiyey
Ciidamo daacad u ah Jeneral Khalif Haftar ayaa maanta dib looga soo riixay saldhig muhiim ah oo 30 KM u jira magaalada Tripoli, taasi oo dib u dhigeysa ku siqitaankooda deg degga ah ee magaalada caasimadda ah ee dalka Libya.
Hogaamiyihii Algeria oo is casilay
Madaxweynaha Algeria Abdelaziz Bouteflika ayaa xalay ku dhawaaqay inuu iska casilay xilka madaxweynenimo, sidaasi waxaa islaamisay wakaaladda rasmiga ah ee wararka u faafisa dowlada Algeria.
Dibadbaxyo waa weyn oo ka socda Algiers
Kumanaan dibad-baxayaal ah ayaa maanta isugu yimid bartamaha magaalada Algiers ee caasimadda dalka Algeria, si ay u kordhiyaan cadaadiska ay ku dalbanayaan inuu is-casilo madaxweyne Abdel Aziz Bouteflika, maalin kadib markii milatariga awoodda badan ee dalka uu ku baaqay inuu xilka ka dego.
Muhaajiriin markab ku afduubtay xeebaha Libya
Markab xamuul oo koox muhaajiriin ah ay ka afduubteen xeebaha Libya ayaa kusoo xirtay dalka Malta, kadib markii ciidamada Malta ay la wareegeen gacan ku hayntiisa.
Hay'ado ka digay qorshaha lagu xirayo Dadaab
Kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa maanta ka digay in rubac milyan Soomaali ah ay rabshado ku wajahayaan dalkooda, haddii Kenya ay sii waddo qorshaha ay ku xirayso xerada qaxootiga ee Dadaab.